Pachave pasina Fortnite yeMac munguva yakareba | Ndinobva mac
Iko hakuzove neFortnite yeMac kwenguva yakareba
Apple yaita sarudzo yekusabvuma Epic Games semusimudziri ane kodzero yekuburitsa mafomu avo paApp Store kusvikira zvese zvikumbiro kubva kumatare edzimhosva kuti muridzi we "Fortnite" neApple apera.
Uye izvo kukwikwidza kumutongo wemutongo kunogona kugara kwemakore. Saka kana iwe uine chero tariro yekutamba zvakare Fortnite pane yako Mac, iPhone kana iPad, unogona kutogara pachigaro kumirira.
Con apuro usatambe. Uye kutarisana nehofori apuro kunogona kukukwevera iwe kumagumo ekupedzisira. Avo veCupertino vakaita sarudzo yekusabvumidza "Fortnite" kuti iwanikwe zvakare muApp Store kudzamara zvese zvichemo zviripo zvichipesana nemutongo wekutongwa kuti Epic Games inopesana neApple yapera.
Uye sezvo kukwidza kwakadai kwepamutemo kunogona kutora makore, tingave tave kutotaura zvakanaka kune mukana wekugona kutamba mune yedu Macs, iPhones y iPads kune Fortnite mune angangoita makore mashoma kana matatu. Hapana kana chinhu.
Mukuru weEpic Mitambo, Tim Sweeney, akataura pachena kuti Apple yakafunga kushandisa kodzero yayo yekubvisa kambani yayo kubva kuApp Store. Gweta raApple, Maka Perry, akaudza Epic gweta Gary Bornstein nezve sarudzo "panguva yekupedzisira" Chipiri chapfuura maererano naSweeney.
Pamusoro pezvo, tsamba yaPerry kuenda kuEpic Games yakataura kuti Apple haifunge nezvekudzosera zvikumbiro kudzamara "mutongo wedare redunhu wapera uye usingafadzi." Sweeney anotenda kuti maitiro anogona kutora kusvika makore mashanu.
Zvinogona kuve makore usati waona Fortnite zvakare pane iyo iPhone, iPad, kana Mac.
Epic Mitambo yakakumbira kudzokera kuApp Store
Sarudzo yaApple yakauya mushure mekunge Epic Games yatumira a chikumbiro kuna Cupertino kuti agadzirise account yake. Apple yakati yaizogamuchira Epic Mitambo - uye "Fortnite" - kudzokera kuApp Store kana ikatevera iyo yakafanana mitemo sevamwe vanogadzira.
Mune meseji kubva kuApple kuenda kuEpic Mitambo, iyo Cupertino tekinoroji hofori inonyevera kuti danho iri rakavakirwa pamutongo wedare uyo unoti Epic Mitambo yatyora chibvumirano chayo seanogadzira mu App Store uye imwe "hunhu hunonyengera."
Dare rinoona zvakare kuti Epic Games yakaputsa chibvumirano chayo nekupinza yakananga kubhadharo chikuva, kutyora mirau yeApple yeApp Store, neayo "Fortnite". Iko kutyora chibvumirano ndosaka Apple inogona kuramba kurambidzwa kweakaundi yeEpic account. Dare rakarairawo Epic Games kuti idzokere pa 30% yemari yawakabhadharisa zvakananga usingapfuure neApp Store.
Uye sezvo Epic Mitambo, isina kufara nemutongo, yakapa nhevedzano ye kukwidza, Apple inekodzero yakakwana yekumirira mhedzisiro yekukumbira kwakadai kuti vabvume Epic Mitambo semugadziri weApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Iko hakuzove neFortnite yeMac kwenguva yakareba
Epic Games chikuva cheMac chiripo… asi chaizvo Fornite yeMac inoda 93,17 GB yenzvimbo (penga!)
Maitiro ekuronga mabhukumaki muSafari 15 pane macOS
Chirevo kubva kuna Tim Cook chinodonhera kuvashandi maanorwisa kuburitsa